सुन्दर खनाल काठमाडौं - बिहीबार, असोज ८, २०७७
डा. गोविन्द केसी गैरअनसनको अवस्थामा प्रायः डब्बामा बन्द गरी राखेका भुटेका मकै चपाएर आफ्नो प्रिय पेय कोकाकोलाको घुट्काले निल्छन्।
भाइका घरमा यदाकदा दालभात, दरबारमार्गतिर कलेज पढ्दाताकाका मित्रसँग भेट जुरे उही मिठो पिज्जा।
भनौं, डा. केसीको जीवनमा के अनसन के गैरअनसन–खानपिन, सोखसयलले कुनै माने राख्दैन। भोकै लागे केही सीमित चिजले पेट भर्ने। लाउने–देखाउने कुरोमा उनको कुनै गणना हुन्न। प्रायः उही खुइले टिसर्टमा एउटा भिर्ने झोला जिउको लुमरुङ-लुमरुङ चालसँगै सर्‌याकसुरुक हल्लिरहने।
अन्न इन्कारीको अवस्थामा चाहिँ डा. केसीका दिमागमा अनेक ‘माग’ उठ्छन्। ज्वारभाटै निस्कन्छन्। यो पनि नगर, त्यो पनि नगर।
आइओएमको डिन हटाउनेदेखि लोकमानको दिन तोक्नेसम्म। कहाँ गएर विष्फोट भइदिने हुन्, कहाँ लडिदिने हुन्, कोसँग भिड्ने हुन्?
मात्र दुई कुरा भएकाले डा. केसी अहिले जेल वा यातनाशालामा छैनन्, वा अहिलेसम्म जीवित छन्। त्याग र साहस।
निन्दा त उनको अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वा उनको प्रवृत्तिका पछाडि लाग्ने ठूलो लस्करले डा. केसीलाई देखिसहँदैन।
उनीहरूका लागि एउटा ‘घाँडो डाक्टर’ ले बेलाबेला कोभिड–१९ ले घाँटीमै हाने झैं सताउँछ।
केही प्रश्न अवश्य उठ्छन्। डा. केसी किन यति सारो घाँडो बन्देका?
घाँडो नबनिकन असल, भद्र र सफल जीवन बिताउने अरू पेसाधर्मी छैनन् र? सबै मामिलाका एकल ठेकेदार डा. केसीमात्र बन्नुपर्ने?
अरूले पनि त गरे हुने! अनि, डा. केसीले बोलेकै मात्र ठिक, अरू सबै बेवकुफीका पुलिन्दा?
अझ कतै एउटा बुजु्रकले कानको जाली बज्ने गरी प्रश्नको ओइरो लगाउन सक्छ : राज्यले के चाहिँ गरे यो डाक्टर आरामले बस्छ? भोकै लडिदिएका भरमा सम्पूर्ण राज्य उसैको चित्त बुझाउन लागिपर्नुपर्ने? राज्यको अरू काम छैन?
डा. केसीलाई एकैछिनमा चुप लगाउन सकिन्छ। उनी सादगी जोगी नै रहुन् या डा. जागेश्वर गौतम, डा. चक्रराज पाण्डे, डा. अशोक बाँस्कोटा वा डा. भगवान कोइरालाजस्ता ‘हाइफ्लाइङ’ डाक्टरको कोटीमा चढुन्, राज्यले केही राम्रा काम गरेका खण्डमा कसैले जे हर्कत गरे पनि केही भन्न मिल्ने ठाउँ रहँदैन।
राज्यले केही असल काम गरेको खण्डमा डा. केसीले फेरि पनि अनसनकै रहर गरे मगमगाउने चौरासी पकवान वरपर राखेर वास्ता नगरिदिए हुन्छ।
तर, ती काम विशुद्ध चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमै केन्द्रित गरे पुग्छ। त्यसपछि डा. केसी अरू विषयमा गिजोलिन जानै पर्दैन। गए पनि माने हुन्न।
ती काम मोटामोटी रूपले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसँग मेल खालान् वा त्योभन्दा पनि राम्रो र प्रगतिशील समाधान राज्यले दिनसक्छ। माथेमा प्रतिवेदनले जम्माजम्मी एक लाइनको सत्यतालाई छुन खोजेको छ– सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो प्रथम मूल दायित्व ठान्नुपर्छ। र, त्यसैअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पनि गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउनुपर्छ। ताकि डा. केसीले भन्ने गरे झैं पैसाका बलले एउटा युवा डाक्टर बनेर मानिसको ज्यानसँग खेल्ने पात्रमा परिणत नहोस्।
शैक्षिक–प्राज्ञिक क्षेत्रलाई जस्तोसुकै नवउदारवादी भनिने विकसित समाजले पनि निश्चित गुणस्तरनिम्ति नियमनको घेरामा राखेको पाइन्छ। आधुनिक पुँजीवादको जननी मुलुक अमेरिकाले पनि असाध्यै मेधावी विद्यार्थीले मात्र चिकित्सा शिक्षा पढ्ने आँट गर्नसक्ने वातावरण बनाएको छ। त्यहाँ पैसाका बलले, एमबिबिएस गर्दासम्म दसौं करोड सक्ने गरी पढ्ने धनी बाउका छोराछोरीहरू पनि हुन्छन्। तर, तिनले पढाइबाट उत्रेर अभ्यासमा उत्रँदासम्म कुनै भेउ नै पाउँदैनन्। धेरै कठिन छ, पैसाका बलले डाक्टर बनेर गरिखान। तर, क्षमताबाट नै डाक्टर बन्नेहरूले चाहिँ अमेरिकामा जति कमाइ अन्त शायदै असुल्लान्।
नेपालमा फरक छ- मुलुकका दुई शीर्ष नेता मेडिकल शिक्षामा ‘डनगिरी’ गर्नेकहाँ गएर पार्टी विवाद मिलाउने हिसाबमा ‘भान्सा गर्न’ पुग्छन्। नेपालीहरूको अजीव हास्य–चेतले त्यो घटनालाई ‘मार्सी चामल प्रकरण’ नामकरण गरिदिन्छ। त्यसो त कुनै प्रकरणको बिल्ला लागेर नेपाली नेतागण गल्नेवाला छैनन्। मेडिकल माफियाको हण्डिभाग लिएर चुनाव जित्ने कमरेड–कांगरेड (स) ले आफ्ना दाताविरुद्ध सोच्ने पनि कल्पना गर्न सकिन्नँ।
हो, डा. केसीलाई चुप लगाउन सक्छ एउटा मानिसले। त्यो मानिस अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा मूर्त छैन वा बन्न बाँकी नै छ वा जन्मन बाँकी नै होला। उसले डा. केसीले मागेभन्दा राम्रो समाधान दिनसक्छ र उनलाई बाँकी जीवनभर अमिट शान्ति दिनसक्छ।
त्यो मानिसले चिकित्सा शिक्षालाई मेधावी विद्यार्थीहरूका लागि पूर्णक्षमतामा आधारित प्रतिस्पर्धी क्षेत्र घोषणा गर्छ। र, स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमा ती विद्यार्थी पढाउन विभिन्नखाले सुविधा र लगानीको कोटा र मापदण्ड निर्धारण गर्छ। सँगसँगै, कुनै निजी क्षेत्र इच्छुक भए त्यसका लागि स्पष्ट र न्यायोचित मापदण्डसहितको बाटो खुलाइदिन्छ।
तर, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा अहिले राजनीतिमा सत्तामोज आजमाएका कोही ठूला पात्र त्यो मानिस बन्न सक्दैन। उनीहरूभन्दा मुनिकाहरू पनि त्यस्तो मानिस बन्ने जोखिम सोचेरै काँप्न सक्छन्। विचार गरौं, डा. केसीको अनसनलाई दुत्कार्ने जति जे होलान, बढ्दै जालान्। तर, उनको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको मागलाई सकारेर प्राणरक्षाको मन्त्र अलाप्नेहरूले त्यसप्रति न्याय हुने योगदान के कति गरे? डा. केसीको हुर्मत लिन चाहनेहरूभन्दा उनका लागि ओठे समर्थनमात्र गर्नेहरू घातक हुन सक्छन्।
एउटा वर्ग छ, जो जब–जब डा. केसी भोकै सुत्न थाल्छन् त्यसपछि विज्ञप्ति फ्याँकेर कार्यभार पूरा गरेको सम्झन्छन्। वास्तवमा हामीकहाँ डा. केसीको प्राणरक्षासँगै उनका मुद्दाकै रक्षासमेत चुनौतिपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित गरेको अकाट्य मूल्य नै चौतर्फी आक्रमणमा छ। त्यो मूल्यको हरण कार्यमा सरकार स्वयंले नेतृत्व गरेको छ।
हामीले यतिबेला कल्पनामात्र गर्नसक्ने त्यस्तो बहादुर र सौर्यपूर्ण मानिस बैध अस्तित्वमा नरहँदा डा. केसीलाई बचाउने कसले त? डा. केसी बचाउन नसक्नु भनेको नेपाली समाजकै शर्मनाक नैतिक पराजय हो। र, यो पराजयबाट जोगिनु पनि एउटा कठोर सामाजिक चुनौति हो।
यो चुनौतितर्फ घच्घचिने वातावरण बनाउन स्वतन्त्र रूपले विभिन्न तप्कालाई नेतृत्व दिएर बस्ने पेसाधर्मीबीच तत्काल एउटा अविभाजित मत बन्न जरुरी छ। त्यो मत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई डा. केसीले सुझाएभन्दा बढी वैज्ञानिक र दुरदर्शीरूपमा रूपान्तरित गर्ने बीउ बन्न सक्नुपर्छ। यसमा सबैभन्दा पहिलो कदम चिकित्सक संघहरूले उठाउनुपर्छ। डा. केसीको जीवनरक्षामा सबैभन्दा बढी सरोकारित हुनुपर्ने चिकित्सकहरू नै हुन्। आज उनीहरूले डा. केसीलाई बचाउन सकेनन् भने दुनियाँमा नेपाली चिकित्सकहरूको इज्जत रहने छैन, प्रकारान्तरसम्म।
एउटा कटु सत्य के हो भने हामी अहिले डा. केसीको यो कन्तबिजोगमा झिङलिने समयमा छैनौं। के सम्झनुपर्छ भने, उनको यसपल्ट प्राण बचाउने यत्न गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा स्थायी र वैज्ञानिक समाधानको बाटोमा लाने प्रष्ट सर्वपक्षीय सहमति निर्माण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। र, त्यो अन्य क्षेत्रका लागि समेत मानक बन्न सक्छ। डा. केसीलाई आफ्नो आधार क्षेत्र बचाउने यो लडाइँमा जिताइदिइसकेपछि उनीमाथि बरु अरू मामिलामा अनसन बस्न चाहिँ बन्देजै लगाइदिए पनि हुन्छ।
ओली सरकारले हाल कुलमान घिसिङलाई बिजुली अड्डामा कायम गरौं भन्ने जनमतलाई धोती लगाइरहेको अवस्था छ। कुलमानले अरू के गरे के गरेनन्, तर लोकतन्त्रकालमा जनतालाई छिनछिनै राहत हुने सबैभन्दा ठूलो काम गरेकै हुन्, लोडसेडिङ हटाउने व्यवस्थापन गरेर। यहाँ स्मरणीय छ, कुलमानलाई लोडसेडिङ हटाउने व्यवस्थापकको श्रेय जनताले स्वस्फूर्त दिइरहँदा तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल सकेर ढाक्रे बसेका ओलीले जस खोस्न जबर्जस्त तर्क गरेका थिए- सबै तयारी मैले गरेको, कुलमानले टाँचा लगाइदियो भन्ने आशयमा।
तिनै कुलमानलाई दोहोर्‌याउन तयार नभइरहेका ओलीमाथि डा. केसीको घाँडो बल्झेको हो। यो निकै कठिन संयोग हो। उनले रमेश खरेललगायतका कर्तव्यपरायण राष्ट्रसेवकलाई ह्याकुलाले पेले, ७० करोडको टेप प्रकरण पचाए, नवीन घिमिरेलगायतलाई बिटुल्याए, आफ्नो आदिभक्त यती समूहलाई उकासे, कोरानाले जनता पिरोलिँदा ओम्नी प्रकरणलाई कालकुट विष झैं पिए। यी सारा चिज गर्ने ल्याकत हुँदाहुँदै उनीमाथि डा. केसीको घाँडो चाहिँ सबैभन्दा चर्को पर्छ।
कामना गरौं, एउटा जोगी डाक्टरको प्राणले ओलीसत्ताको नैतिक-निधन टार्न सकोस्।